Khabiirka Kala Duwan: Website Wareer iyo Muuqaalkiisa Mashruuca Mucaaridyada Macluumaadka
barnaamijyada soo saara xogta laga helo boggaga internetka sida ku qoran tilmaamahaaga. Noocyada kale ee caadiga ah iyo kuwa dhaqanka ee qalabaynta , waraaqaha ee shabakadda internetka waxay ujeedadeedu tahay inay u beddesho xogta aan nidaamsanayn ee ku jira xogta habaysan, ka dibna la keydiyo oo lagu eego xogta macluumaadka. Isticmaalidda qalabkan, way sahlan tahay in laga soo saaro macluumaadka bogagga internetka. Qaar ka mid ah sharciyada ayaa loo hagaajiyaa si loo ilaaliyo macluumaadka gaarka loo leeyahay ee ku saabsan wargeysyada, waraaqaha safarka, iyo shabakadaha internetka bulshada. Baadhaha Webka wuxuu raacayaa dhammaan sharciyada oo wuxuu ku siinayaa xog aan xor aheyn oo ku saabsan dhacdooyinka saacadaha.
Doorka mashaariicda wax soo saarka:
Haddii aad tahay barnaamij, coder, aqoonyahan, suxufi, webmaster ama ganacsade, waxaad had iyo jeer u baahan doontaa si fiican oo loo soo saaro macluumaadka si loo hagaajiyo waxqabadkaaga boggaaga iyo kobcinta ganacsigaaga. Waad ku mahadsan tahay, sawirka webka wuxuu qaadi karaa tiro badan oo mashaariicda soo saarida iyo ballanqaadyo siinta macluumaadka qaababka la jecelyahay sida CSV iyo JSON.
Doorashada hore ee shirkadaha iyo shirkadaha
Dalabaad sare, shirkado iyo ganacsiyo kala duwan ayaa doorta mashiinka shabakada si looga shaqeeyo xogta la isku halleyn karo oo sax ah. Qalabkani ma aha oo kaliya xayiray ama soo saarayo macluumaadka laakiin sidoo kale waxay saxaysaa qaladaad naxwe ahaaneed ama qorista lafteeda. Tan macnaheedu waa xogta aan heleyno waa qalad la'aan iyo illaa calaamada. Waxay ka caawisaa shirkadaha inay wargeliyaan macaamiishooda oo ay ku jiraan isbedelka qiimaha iyo dallacsiinta. Intaa waxaa dheer, warshadaha shabakada waxay ka caawisaa shirkadaha inay barbar dhigaan sharaxaadda badeecada iyo qiimaha ay ku tartamayaan.
Is-beddelka cimilada leh waraaqaha shabakada
Waa tan ugu caansan uguna muuqda sawir gacmeed. Waxay kormeertaa isbeddelada cimilada waxayna caawisaa mihnadlayaasha mawjadaha waxay diiradda saaraan xaaladaha cimilada si habboon. Qalabkani wuxuu ka reebayaa macluumaadka laga helo warbaahinta kala duwan iyo bogagga internetka, in la helo macluumaad ballaaran oo ku saabsan jawiga, isbeddelka cimilada, wasakheynta iyo waxyaabaha kale ee la midka ah.
Wanaagsan shabakadaha internetka e-commerce
Haddii aad sameysey shabakadda e-commerce oo waxay raadineysaa in laga soo saaro xogaha laga helo goobo kala duwan sida Amazon iyo eBay, waa inaad isku daydaa waraaqaha webka. Qalabkan, waxaa laguu xaqiijin karaa inaad hesho macluumaad dhab ah oo sax ah sida sharaxaadda badeecada, macluumaadka qiimaha, koobabka alaabta iyo sawiradooda. Waxa kale oo ay ka caawisaa ganacsatada iyo xirfadlayaasha warbaahinta bulshada inay kor u qaadaan alaabada iyo adeegyadooda si habboon. Guud ahaan, xajmiga shabakadu waa qalab wax ku ool ah oo faa iido leh oo leh waxyaabo kala duwan iyo qaababka.
Dib u helida bogagga shabakada iyo firfircoonida
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan uguna wanaagsan ee sawir-qaadaha bogga waa qalabkani wuxuu ka helayaa bogagga internetka iyo bogga internetka ah. Waxa kale oo ay bedeshaa content webka oo loo gudbiyo xogta laqalsho iyo waxay u oggolaataa samaynta qaababka istiraatiijiyadeed ee garabka. Sidaa daraadeed, waraaqaha bogagga waxay la tacaali karaan macluumaadka casriga ah iyo bogag internetka ah oo ay ka soo saari karaan macluumaadka iyaga oo ah daqiiqado.
Beddel wanaagsan oo lagu soo dejiyo. io iyo Kimono Labs:
Soo dejinta. io iyo Kimono Labs waa laba bog oo caan ah oo shabakadda internetka ku yaal. Waxay ku yimaadaan labada lacag oo bilaash ah oo lacag ah, waxayna fududeeyeen tiro dad ah illaa iyo haatan. Waa ammaan in la yiraahdo "Website Scraper" waa mid lagama maarmaan u ah soo dejinta. io iyo Kimono Labs oo ujeedadoodu tahay ururinta, kaydinta iyo falanqaynta xogta waxtar leh ee isticmaalayaasheeda. Sidaas darteed, qalabkani waa mid aad u fiican labadaba mashaariicda interneetka iyo offline Source .